> Resource> iTunes> Olee ka mmekọrịta iPad na iTunes na atụfu ihe ọ bụla
Ọ bụ ezi echiche ka mmekọrịta iPad na iTunes. Otu ihe ị pụrụ irite uru bụ na ị pụrụ mmekọrịta ọdịyo na video si iPad ka iTunes maka ndabere. E wezụga, mgbe ị na-eme ida iTunes ọbá akwụkwọ a na kọmputa okuku ma ọ bụ izu ohi, ị nwere ike ozugbo wughachi ya. Otú ọ dị, tupu mmekọrịta, ị ga-Kweta na iTunes ga-ewepụ data na gị iPad na mbubata ihe na-iTunes na kọmputa gị iPad.
Ka mmekọrịta data si iPad ka iTunes na efu ọnwụ, Ị nwere ezigbo onye inyeaka - Wondershare TunesGo (Windows) ma ọ bụ Wondershare TunesGo (Mac). Ọ na-enyere gị mmekọrịta music faịlụ, listi ọkpụkpọ, fim, pọdkastị, iTunes U, audiobook, music video, TV na-egosi na gị na iPad ka iTunes.
Download a usoro ka iPad mmekọrịta iTunes.
Ma Windows version na Mac version eme nke ọma na syncing gị iPad na iTunes. Ebe a, m na-ekpebi-elekwasị anya na Wondershare TunesGo. N'ihi na Mac ọrụ, na-eme yiri usoro dị ka Windows version na-eme.
Cheta na: Wondershare TunesGo akwado mmekọrịta iPad na Retina ngosi, iPad 2, iPad Air, The New iPad, wdg ka iTunes. Ego niile na-akwado iPads na ha iOS ebe a.
Olee otú mmekọrịta iPad na iTunes
Wụnye na ẹkedori TunesGo na kọmputa gị. Ẹkedori ya iji bugote a window.
Cheta na: E wezụga syncing iPad ka iTunes, TunesGo nwekwara ike gị mmekọrịta iPad na kọmputa.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ iPad na kọmputa na iji eriri USB
Jikọọ iPad ị ga-amasị ka mmekọrịta na iTunes na kọmputa site na iji eriri USB. Mgbe ịchọputa iPad, Mobile Go N'ihi na iOS ga-egosi ya na data ke akpan window.
Nzọụkwụ 2. mmekọrịta iPad ka iTunes
Na ala akara ke akpan window, pịa "Copy iDevice ka iTunes". Na ndọpụta window, pịa "Malite". Mgbe ahụ, data niile, gụnyere music, fim na audiobook na-enyocha ke window. Dị nnọọ ka ị na-chọrọ data enyocha. Wee pịa "Detuo na iTunes".
E wezụga syncing iPad ka iTunes na usoro a, ị nwere ike karị mmekọrịta họrọ music, fim, egwú videos, wdg ka iTunes. Na-ekpe sidebar, pịa "Media". N'elu akara, pịa ọ bụla taabụ ka mmekọrịta music, fim, Podcast, iTunes U, audiobook, music video-egosi na TV ka iTunes.
Ọ bụrụ na ị pịa "Smart Mbupụ na iTunes", programmụ a ga nyo data i nwere na iTunes na kọmputa, na mmekọrịta n'aka ekpe.
Site na ịpị abịazi nọdụ triangle n'okpuru "Export ka"> "Mbupụ na iTunes Library", i nwere ike mmekọrịta niile ma ọ bụ họrọ data ka iTunes karị. Ma, i nwere ike mmekọrịta data na i tinyeworị nwere na iTunes.
Ụzọ abụọ dị. Dị nnọọ họrọ onye ị na-ahọrọ.
Ka mmekọrịta playlist ka iTunes, ị nwere ike pịa "Playlist" ke ekpe sidebar. Mgbe ị na-ahọrọ listi ọkpụkpọ ị ga-amasị ka mmekọrịta. Pịa triangle n'okpuru "Export ka" wee pịa "Mbupụ na iTunes Library".
Cheta na: Wonershare TunesGo (Mac) anaghị akwado syncing playlist na music Ama, dị ka Fim, igwu egwu na-adabere, ka iTunes na oge ịbụ.
Download TunesGo na-agbalị syncing iPad na iTunes.
Olee otú Download Music si iPad ka Computer